यी ४ कुरा भएका घरमा बस्दै नबस्नुस् : तपाइकाे ज्यानै जान सक्छ ! » Khulla Sanchar
यी ४ कुरा भएका घरमा बस्दै नबस्नुस् : तपाइकाे ज्यानै जान सक्छ !
यति कुरा भएको ब्यक्ति संसारमा सुखी हुन्छ । तर यी सबै कुरा जीवनमा पाउनु मुस्किको कुरा हो । खासमा अधिकाँश मानिसलाई यस विपरितको अवस्था प्राप्त हुन्छ । गरुण पुराणका अनुसार खराव स्वभाव भएकी पत्नि, बाद विवाद गरिरहने नोकर र सर्प बसेको घरमा बस्नु सँधै खतरनाक हुन्छ ।
१ खराव पत्निः
हिन्दु धर्ममा पत्निलाई सम्मानीय मानिएको छ । परिवार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पत्निमा भर पर्छ । पत्निसँग नराम्रो ब्यवहार गर्नु पनि गलत मानिन्छ । पत्निलाई त्यसैकारण अर्धाङ्गिनी भनिएको हो । तर पत्निको स्वभाव खराव छ भने त्यस्तो पत्निको पतिले दुःख पाउने निश्चित छ । अझ परपुरुषसँग संगत भएकी ब्यविचारिणी पत्नि भएमा यस्ता पुरुष सँधै खतरामा हुन्छ । त्यसकारण खराव पत्निसँग बस्नु खतरनाक भनिएको छ ।
२ दुष्ट मित्रः
जीवनमा सच्चा साथी हुनु दुर्लभ कुरा हो । अझ दुखमा समेत साथ दिने साथी त जीवनमा कमै पाइन्छ । हामीले साथीको विषयमा विभिन्न कथा सुनेका छौं । कतिपय अवस्थामा हामीले सच्चा साथी ठानेर विश्वास गरेको मानिस सबैभन्दा घातक भएर निस्कन्छ । यदि तपाइँले त्यस्तो साथीलाई विश्वास गरिरहनु भएको छ भने तपाइँ सँधै खतरामा हुनु हुन्छ । दुष्ट मित्र रहेको घरमा बस्नु सँधै खतरनाक हुन सक्छ ।
३ झगडा गर्ने नोकरः
घरमा नोकर राख्ने चलन पुरानो हो । काम गर्नका लागि मानिसहरुले अहिले पनि घरमा मानिस राख्छन् ।तर मालिक र नोकरको सम्बन्ध सुमधुर हुन कठिन हुन्छ । त्यसैले बादविवाद गरिरहने र झगडा गर्न तम्सिने नोकरलाई शास्त्रले खतरनाक भनेको छ । मालिकसँग झगडा गरिरहने नोकरलाई तत्काल कामबाट निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । किन भने त्यस्तो नोकर खतराको घर हो ।